ရည်းစားကပစ်သွားလို့ အဆိပ်သောက်သတ်သေသွားတဲ့ဆရာဝန်မလေး - Update News
ရည်းစားကပစ်သွားလို့ အဆိပ်သောက်သတ်သေသွားတဲ့ ဆရာဝန်မလေးစာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ညီမလေးတို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့သမီးလေးရှိတယ် ၊ တစ်နေ့သမီးလေးဟာအတန်းတင်စာမေးပွဲမှာပထမရတယ် ။ အဖေဟာဝမ်းသာလွန်းလို့ လိုချင်တာဝယ်ပေးမယ်ပြောတယ် ။
သမီးလေးဟာသိပ်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေမှာပိုက်ဆံမရှိမှန်းသိလို့မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစားတစ်စုံကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ် ။နောက်တစ်နေ့မှာအဖေဟာ သမီးလေးလိုချင်တဲ့အဝတ်တစ်စုံကိုဝယ်ပေးလိုက်တယ် သမီးလေးဟာဝတ်ကြည့်ပြီးမှန်ရှေ့မှာပျော်လို့ ၊ အဖေကလည်းသမီးလေးကိုကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့မျက်ရည်စို့နေရှာတယ် ၊ မပျော်နိုင်သူကအမေပါ ။
ညရောက်တော့အမေကသူ့ယောက်ျားကိုမေးတယ် ၊ပိုက်ဆံဘယ်ကရသလဲပေါ့ ? ” ဆေးရုံတစ်ခုမှာငါ့သွေးဖောက်ရောင်းလိုက်တာတဲ့ ”ဒီလိုနဲ့သမီး ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး အများကြီးရပြီးအောင်သွားတယ် ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အဖေ့မှာပိုက်ဆံမရှိမှန်းသိလို့ မပူဆာပါဘူး ၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့အဖေက ပိုက်ဆံတွေ ထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်ကြီးကိုပြပြီးသမီးမပူနဲ့ အဖေ့မှပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိတယ် ၊ သမီးဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ထိလုံလောက်ပါတယ်တဲ့ ။
သမီးလည်းဝမ်းသာလွန်းလို့ထကနေတယ် ၊ အဖေခမျာလည်းသမီးကိုကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ပါးပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေနဲ့ ၊ မပျော်နိုင်သူကအမေပါ ။ညကျတော့အမေကသူ့ယောက်ျားကိုမေးတယ် ၊ ဒီလောက်များတဲ့ပိုက်ဆံဘယ်လိုရလာသလဲပေါ့ ?” တစ်လောကငါ့ကျောက်ကပ် ၂ ခုထဲက တစ်ခုကိုရောင်းလိုက်တယ်တဲ့ ” ၆ နှစ်ကြာသွားပြီး အပျော်ဆုံးနဲ့ဂုဏ်အယူရဆုံးနေ့ ၊သမီးလေးဆေးကျောင်းအောင်သွားပြီးအိမ်ပြန်လာတော့မယ် ၊ တဲအိမ်လေးကိုအကောင်းဆုံးပြင်ထားတယ် ။ အိမ်ရှေ့မှာမြင်းလှည်းတွေရပ်သံကြားရတယ် ၊ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး ဝမ်းသာအားရပြေးထွက်လာတယ် ဟုတ်ပါတယ်သမီးလေးပြန်လာတာပါ ၊ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လျှက်မဟုတ်ပါ ပိတ်ဖြူအုပ်ထားတဲ့သမီးလေးရဲ့ရုပ်အလောင်း ။
လာပို့တဲ့သူတွေထဲကလူကြီးတစ်ယောက်ကပြောတယ် ၊ သူတို့သမီးလေးဟာသူ့ရည်းစားပစ်သွားလို့ မနေ့ညကအဆိပ်သောက်သတ်သေသွားတယ်တဲ့ ။ စဉ်းစားစရာ အတွေးလေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။” မိမိကိုမနှစ်သက်လို့စွန့်ခွာသွားသူအတွက် အသက်ပေးသင့်သလား ? မိမိအတွက်အနစ်နာခံခဲ့သူတွေအတွက် အသက်ပေးဖို့မသင့်ဘူးလား ?
ရည္းစားကပစ္သြားလို႔ အဆိပ္ေသာက္သတ္ေသသြားတဲ့ ဆရာဝန္မေလးစာဖတ္မပ်င္းပါနဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ညီမေလးတို႔ေရ ဆင္းရဲတဲ့လင္မယား ၂ ေယာက္မွာ စာေတာ္တဲ့သမီးေလးရွိတယ္ ၊ တစ္ေန႔သမီးေလးဟာအတန္းတင္စာေမးပြဲမွာပထမရတယ္ ။ အေဖဟာဝမ္းသာလြန္းလို႔ လိုခ်င္တာဝယ္ေပးမယ္ေျပာတယ္ ။
သမီးေလးဟာသိပ္လိုခ်င္ခဲ့ေပမဲ့ အေဖမွာပိုက္ဆံမရွိမွန္းသိလို႔မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ္အစားတစ္စုံကိုလိုခ်င္တယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ ။ေနာက္တစ္ေန႔မွာအေဖဟာ သမီးေလးလိုခ်င္တဲ့အဝတ္တစ္စုံကိုဝယ္ေပးလိုက္တယ္ သမီးေလးဟာဝတ္ၾကည့္ၿပီးမွန္ေရွ႕မွာေပ်ာ္လို႔ ၊ အေဖကလည္းသမီးေလးကိုၾကည့္ၿပီး ေပ်ာ္လြန္းလို႔မ်က္ရည္စို႔ေနရွာတယ္ ၊ မေပ်ာ္ႏိုင္သူကအေမပါ ။
ညေရာက္ေတာ့အေမကသူ႔ေယာက္်ားကိုေမးတယ္ ၊ပိုက္ဆံဘယ္ကရသလဲေပါ့ ? ” ေဆး႐ုံတစ္ခုမွာငါ့ေသြးေဖာက္ေရာင္းလိုက္တာတဲ့ ”ဒီလိုနဲ႔သမီး ၁၀ တန္းကို ဂုဏ္ထူး အမ်ားႀကီးရၿပီးေအာင္သြားတယ္ ၊ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ဖို႔အေဖ့မွာပိုက္ဆံမရွိမွန္းသိလို႔ မပူဆာပါဘူး ၊ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့အေဖက ပိုက္ဆံေတြ ထည့္ထားတဲ့ လြယ္အိတ္ႀကီးကိုျပၿပီးသမီးမပူနဲ႔ အေဖ့မွပိုက္ဆံေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ ၊ သမီးဆရာဝန္ျဖစ္တဲ့ထိလုံေလာက္ပါတယ္တဲ့ ။
သမီးလည္းဝမ္းသာလြန္းလို႔ထကေနတယ္ ၊ အေဖခမ်ာလည္းသမီးကိုၾကည့္ၿပီး ေပ်ာ္လြန္းလို႔ပါးျပင္ေပၚမွာမ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ၊ မေပ်ာ္ႏိုင္သူကအေမပါ ။ညက်ေတာ့အေမကသူ႔ေယာက္်ားကိုေမးတယ္ ၊ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ပိုက္ဆံဘယ္လိုရလာသလဲေပါ့ ?” တစ္ေလာကငါ့ေက်ာက္ကပ္ ၂ ခုထဲက တစ္ခုကိုေရာင္းလိုက္တယ္တဲ့ ” ၆ ႏွစ္ၾကာသြားၿပီး အေပ်ာ္ဆုံးနဲ႔ဂုဏ္အယူရဆုံးေန႔ ၊သမီးေလးေဆးေက်ာင္းေအာင္သြားၿပီးအိမ္ျပန္လာေတာ့မယ္ ၊ တဲအိမ္ေလးကိုအေကာင္းဆုံးျပင္ထားတယ္ ။ အိမ္ေရွ႕မွာျမင္းလွည္းေတြရပ္သံၾကားရတယ္ ၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလုံး ဝမ္းသာအားရေျပးထြက္လာတယ္ ဟုတ္ပါတယ္သမီးေလးျပန္လာတာပါ ၊ဒါေပမဲ့အသက္ရွင္လွ်က္မဟုတ္ပါ ပိတ္ျဖဴအုပ္ထားတဲ့သမီးေလးရဲ႕႐ုပ္အေလာင္း ။
လာပို႔တဲ့သူေတြထဲကလူႀကီးတစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ ၊ သူတို႔သမီးေလးဟာသူ႔ရည္းစားပစ္သြားလို႔ မေန႔ညကအဆိပ္ေသာက္သတ္ေသသြားတယ္တဲ့ ။ စဥ္းစားစရာ အေတြးေလးေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ ။” မိမိကိုမႏွစ္သက္လို႔စြန႔္ခြာသြားသူအတြက္ အသက္ေပးသင့္သလား ? မိမိအတြက္အနစ္နာခံခဲ့သူေတြအတြက္ အသက္ေပးဖို႔မသင့္ဘူးလား ?
Previous Article မြန်မာ့ဖရဲ ကမ္ဘာကျော်ပါပြီ စင်ကာပူနဲ့ ကာတာတို့ကနေ အမှာစာများ ထပ်မံရောက်ရှိ
Next Article ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကိုတားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံးရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် ကလေးကို ရေအိုင်ထဲခေါ်ကာ ဓမ္မတာဆန့်ကျင်
(၂၀၀၈) ခြေဉအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကို မည်သည့်တရားရုံးကမှ ဆင့်ခေါ်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိ
ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏သမီးဖြစ်သူ မနိုင်နိုင်အေးကို ယူနက်စကိုက အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်း
အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးအတွက် ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာ ချွတ်အိပ်သင့်သလား ?
ကြည့်ရှု့သူ 17သိန်းကျော်သွားပီဖြစ်တဲ့ တောသဘာဝ လှပျိုဖြူတို့ရဲ့ လုံးဝဥသုံဘုတ်ဆုံအထင်မကြီး ရုပ်သံဖိုင်
FB သုံးရတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကြောင့် ဘေလ်ကုန်ရကျိုးနပ်နေတာပါ
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့် နော်ဝေးတွင် လူ ၁၃ ဦး သေဆုံ